1 Na afei, aJacob kãa nsɛm pii kyerɛɛ mo nkorɔfo wɔ dɛm aber no mu; naaso dɛm ndzɛmba yi nko na mehyɛɛ dɛ bwɔnkyerɛw, na ndzɛmba a m’akyerɛw yi ara dɔɔ sõ ma me.
2 Na afei emi, Nephi, mekyerɛw aIsaiah ne nsɛm no pii, osiandɛ me kra enyi gye ne nsɛm ho. Osiandɛ medze ne nsɛm bɛyɛ mfatoho ama mo nkorɔfo, na medze akɛma me mba nyinara, osiandɛ nokwar, ohun mo bPomfo no, dɛ mbrɛ mo so muhun no no.
3 Na mo nua, Jacob, so aehu no dɛ mbrɛ mo so mehu no; dɛm ntsi, medze hɔn nsɛm bɔkɔ akɛma me mba dze akyerɛ hɔn dɛ me nsɛm yɛ nokwar. Dɛm ntsi, Nyankopɔn se menam bbaasa nsɛm do, mebɛda me nsɛm edzi. Naaso, Nyankopɔn soma adasefo pii, na osi ne nsɛm nyinara pi.
4 Hwɛ, me kra enyi gye dɛ merekyerɛ mo nkorɔfo ama wohu nokwar a ɔwɔ Christ ne bmbae no mu; ɔnam dɛm ntsi na cMoses mbra no wɔdze mae; na adze biara a Nyankopɔn dze ama nyimpa fitsi wiadze ahyɛse no, yɛ esusudze a ɔkyerɛ no su.
5 Na me kra so enyi gye wɔ aahyɛmu a Ewuradze nye hɛn egyanom dzii no ho; nyew, me kra enyi gye wɔ n’adom na ne pɛrpɛrdzi na no tum na n’ehumbɔbɔr kɛse nye onnyiewiei nhyehyɛɛ a ɔayɛ dɛ obeyi hɛn efi owu mu no ho.
6 Na me kra enyi gye dɛ merekyerɛ mo nkorɔfo ma woehu dɛ agyedɛ Christ ba, ɔno adasamba nyina bɛhera.
7 Osiandɛ sɛ Christ annyi hɔ a nna Nyame nnyi hɔ; na sɛ Nyame nnyi hɔ a nna hɛn so yennyi hɔ, osiandɛ nna babɔdze biara so nnyi hɔ. Mbom Nyame wɔ hɔ, na ɔno nye Christ, na ɔreba nankasa ne mber pa mãhyɛ mu.
8 Na afei, mekyerɛw Isaiah ne nsɛm no bi, ama mo nkorɔfo mu biara a obohu dɛm nsɛm yi no aama n’akoma do na oedzi dɛw ama adasa nyinara. Na afei nsɛm no nye iyinom, na hom mfa nto homho na adasa nyinara.
2 Ne. 27:12; Ether 5:2–4; N&A 5:11.